ဖူးနုသဈ: ယောကျြားဆိုတာ အတှငျးစိတျကို သိနိုငျတဲ့သူ မဟုတျဘူး
Posted by ZT at 11:08 PM
ရယ်သွားတယ်။ မှန်နေလို့.။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေ ကိုယူပြီးမှ ဘဲပြောစေချင်ပါတယ် မိန်းမမရလိုက်မှာ စိုးလို့ပါ.။
ဘိုးတော်ကျောက်က ရီထားတာကို ကြည့်ပြီး
ပိုပြီး ရယ်ရပါတယ်၊ အမကြီး မခင်ဦးမေ
ကတော့ မှန်တယ် ပြောတာပဲ ...း)
ယားရင်တော့ ကိုယ်တင်မက သူလဲ ကုပ်မှာပါပဲ... :D
အေးဟာ.နင်စောစောသာ ဒါတွေပြောပြရင် ငါ မိန်းမပဲ ယူမှာပေါ့။
မှနျကနျလှနျးတဲ့ အဆိုအမိနျ့မြားဆိုပွီး စာအုပျထဲ ရေးမှတျထားဦးမယျဗြာ :D
နံပါတ် (၂ ) အိမ်သာကြွေခွက်ကိစ္စကို ဖတ်ပြီး.. ကိုဇက်တီ ငါတို့အိမ်ကို ကိုယ်ဖျောက်ပြီးလာဖူးသလားလို့ ဘုရား..ဘုရား... တ သွားတယ်......
ဟုတ်ပါတယ်.. မှန်ပါတယ်လို့ အောင့်သီးအောင့်သက် ဝန်ခံသွား၏။
However, with the toilet case, I haveafew comments. In some western countries, it is part of the ethics to put down the toilet-thing if the toilet is known to be shared withalady.
It is absolutely true that "crying (weeping) isakind of threat." and "to ask what you want" as well as "tell me either what to do or what you want, not both.".
မှန်လိုက်လေ နံပါတ် ၂၅ ဆိုရင် မှန် မှန် နဲ့ကို ထအော်လိုက်ချင်တာ lolz
ဘာလို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဝနေမှန်းသိရဲ့သားနဲ့ ဝနေလားဟင်.. လို့ ဘာလို့ မေးတတ်ရတာလဲ မသိဘူး.. ဒီပိုစ့်ကို မိန်းမကို ပြမှဖြစ်မယ်.....
ကျနော့်တွက်တော့ အဆင်ပြေပါတယ် ကိုယ်ကလည်းစိတ်ကယောကျာ်းလေးဆိုတော့
လိုချင်တာကို ပေါ်တင်ပြောတယ် D7000 လိုချင်တယ် ဝယ်ပေး ၊ ဘာ ရှင့် ၃ဒီ ကင်မလာဟုတ်လား နောက်မှဝယ် ..ဟဲဟဲ ။
အိမ်သာခွက်ကတော့ပြဿနာမတက်ဘူး ကိုယ်ကလည်း အပေါ်တင်ထားတာပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့။